I-imeyili: I-Soft Bounce ne-Hard Bounce Code Lookup nezincazelo | Martech Zone
I-imeyili bounce kulapho i-imeyili ingamukelwa yiseva yeposi yoMhlinzeki Wensizakalo Ye-inthanethi yekheli elithile le-imeyili futhi ikhodi ibuyiselwa ukuthi umyalezo wenqatshiwe. Ama-bounces achazwa njengokuthambile noma kanzima. Ukubhampa okuthambile ngokwesikhashana nje futhi kuyikhodi yokutshela umthumeli ukuthi angafisa ukuqhubeka nokuzama. Ama-bounces aqinile ngokuvamile zihlala unomphela futhi zinamakhodi okutshela umthumeli ukuthi angazami ukuzama ukuthumela umyalezo futhi kumamukeli.
Incazelo ye-Soft Bounce
A gxuma okuthambile iyinkomba yesikhashana yenkinga enekheli le-imeyili lomamukeli. Kusho ukuthi ikheli le-imeyili belisebenza, kepha iseva yalinqaba. Izizathu ezijwayelekile zokubhampa okuthambile ibhokisi leposi eligcwele, ukuphuma kweseva, noma umyalezo wawumkhulu kakhulu. Iningi labanikezeli bezinsizakalo ze-imeyili bazophinda bazame ukuthumela lo myalezo izikhathi eziningi esikhathini esiyizinsuku ezimbalwa ngaphambi kokuyeka. Bangavimba noma bangavimbi ikheli le-imeyili ukuthi lingathunyelwa futhi.
Incazelo ye-Hard Bounce
A ukuqhuma kanzima iyinkomba ehlala njalo yenkinga ngekheli le-imeyili lomamukeli. Kusho ukuthi, ngokunokwenzeka, ikheli le-imeyili belingavumelekile futhi iseva yalinqaba unomphela. Kungenzeka kube ikheli le-imeyili elingalungile noma ikheli le-imeyili ebelingekho noma elingasekho kuseva yemeyili yomamukeli. Abahlinzeki benkonzo ye-imeyili bazovimba lawa makheli e-imeyili ukuthi angathunyelwa futhi. Ukuthumela kaninginingi ekhelini le-imeyili elilukhuni kungenza ukuthi umhlinzeki wesevisi yakho ye-imeyili avale ohlwini.
I-4XX Soft Bounce ne-Hard Bounce Code Lookup nezincazelo
Ikhodi Uhlobo Incazelo
421 Soft Isevisi ayitholakali
450 Soft Ibhokisi leposi alitholakali
451 Soft Iphutha ekuqhubekisweni
452 Soft Isitoreji esanele sohlelo
Njengoba omunye wabaphawuli bethu abonile ngezansi, okungokoqobo I-RFC ehlotshaniswa nokulethwa kwe-imeyili namakhodi wokubuyisa icacisa ukuthi amakhodi wefomethi engu-5.XXX.XXX angama- Ukwehluleka unomphela, ngakho-ke ukuqokwa kwamakhodi aqinile kungahle kufanele. Inkinga akuyona ikhodi ebuyisiwe, yindlela okufanele uliphathe ngayo ikheli le-imeyili eliwumthombo. Uma kwenzeka amakhodi akhonjiswe ngezansi, sikhombisa amanye amakhodi njenge Soft.
Kungani? Ngoba ungazama futhi noma uthumele i-imeyili entsha kulabo abamukeli ngokuzayo futhi bazosebenza kahle impela. Ungahle ufise ukufaka umqondo ekulethweni kwakho ukuzama kabusha amahlandla amaningi noma kuyo yonke imikhankaso eminingi. Uma ikhodi iqhubeka, ungahle ubuyekeze ikheli le-imeyili njenge- akunakuthenjwa.
I-5XX Soft Bounce ne-Hard Bounce Code Lookup nezincazelo
500 Hard Ikheli alikho
510 Hard Esinye isimo sekheli
511 Hard Ikheli lebhokisi leposi elingalungile
512 Hard Ikheli lesistimu engafanele yendawo
513 Hard I-syntax yekheli lebhokisi leposi elingalungile
514 Hard Ikheli lebhokisi leposi lendawo liyindida
515 Hard Ikheli lebhokisi leposi lendawo livumelekile
516 Hard Ibhokisi leposi lihambile
517 Hard I-syntax yekheli lomthumeli ongalungile
518 Hard Ikheli lohlelo lomthumeli ongalungile
520 Soft Esinye isimo noma ibhokisi lebhokisi leposi elingachazwanga
521 Soft Ibhokisi lemeyili likhutshaziwe, ayemukeli imiyalezo
522 Soft Ibhokisi leposi ligcwele
523 Hard Ubude bomlayezo budlula umkhawulo wokuphatha
524 Hard Inkinga yokwandiswa kohlu lwamakheli
530 Hard Esinye isimo sesimo se-imeyili esingachazwanga
531 Soft Isistimu yeposi igcwele
532 Hard Isistimu ayemukeli imiyalezo yenethiwekhi
533 Hard Isistimu ayikwazi izici ezikhethiwe
534 Hard Umlayezo mkhulu kakhulu kusistimu
540 Hard Enye inethiwekhi engachazwanga noma isimo somzila
541 Hard Ayikho impendulo evela kumsingathi
542 Hard Ukuxhumeka okungalungile
543 Hard Ukuhluleka kweseva yomzila
544 Hard Ayikwazi ukuhambisa
545 Soft Ukuhlangana kwenethiwekhi
546 Hard Kutholwe iluphu yomzila
547 Hard Isikhathi sokuthumela: YINI
550 Hard Esinye isimo se-protocol esingachazwanga
551 Hard Umyalo ongavumelekile
552 Hard Iphutha le-syntax
553 Soft Baningi kakhulu abamukeli
554 Hard Izimpikiswano zomyalo ezingavumelekile
555 Hard Uhlobo lwephrothokholi engalungile
560 Hard Elinye noma iphutha lemidiya elingachazwanga
561 Hard Imidiya ayisekelwa
562 Hard Ukuguqulwa kuyadingeka futhi kunqatshelwe
563 Hard Ukuguqulwa kuyadingeka kodwa akusekelwa
564 Hard Ukuguqulwa nokulahlekelwa okwenziwe
565 Hard Ukuguqulwa kwehlulekile
570 Hard Esinye isimo sokuphepha esingachazwanga
571 Hard Ukulethwa akugunyaziwe, umyalezo wenqatshiwe
572 Hard Ukunwetshwa kohlu lwamakheli kuvunyelwe
573 Hard Ukuguqulwa kwezokuphepha kuyadingeka kepha akunakwenzeka
574 Hard Izici zokuphepha azisekelwe
575 Hard Ukwehluleka kwe-Cryptographic
576 Hard I-Cryptographic algorithm ayisekelwa
577 Hard Ukwehluleka kobuqotho bomlayezo
911 Hard I-Hard bounce ngaphandle kwekhodi ye-bounce etholakele Kungaba i-imeyili engavumelekile noma i-imeyili enqatshiwe evela kuseva yakho yeposi (njengasemkhawulweni wokuthumela)
Amanye ama-ISP nawo anokucaciswa okwengeziwe kumakhodi wawo we-bounce. Bheka I-AOL, I-Comcast, Cox, I-Outlook.com, I-Postini futhi Yahoo!'s postmaster sites for additional bounce code Izincazelo.
Tags: Amakhodi we-400 bounce421 ibhampi elithambile450 ibhampi elithambile451 ibhampi elithambile452 ibhampi elithambileAmakhodi we-500 bounce500 bounce kanzima510 ikhodi yokubhampa511 ikhodi yokubhampabounce izincazelo zekhodibounce ukubheka ikhodibounce amakhodiamakhodi we-imeyili bounceukuqhuma kanzimaamakhodi we-hard bounceukuqhuma kanzima noma okuthambilerfc 3463gxuma okuthambileamakhodi we-bounce athambile
Dec 5, 2016 ku-3: 56 AM
Sawubona, ngididekile ukuthi izimo ze-imeyili zibalwa kanjani ngokususelwa kumakhodi abe ngama-bounces athambile noma aqinile. Ngoba lapha, ku-RFC 3463 (https://tools.ietf.org/html/rfc3463) ithi amakhodi ngefomethi engu-4.XXX.XXX angamaPresistent Transient Failures okusho ukuthi angena esigabeni esithambile namakhodi ngefomethi engu-5.XXX.XXX angamaPermanent Failures, okusho ukuthi awela ngaphansi kwama-bounces aqinile.
Ungacacisa ukuthi kungani kunamakhodi athile wesimo aqala kusuka ku-5 ahlukaniswa njengama-bounces athambile kule ndatshana?
Jan 14, 2017 ku-5: 25 AM
Ngicabanga ukuthi i-Rajit yakho yangakwesokudla, umbhali kufanele acacise futhi afake i-athikili ngokufanele. Akukho lutho olubi ukwedlula ulwazi olungelona iqiniso!
Jan 14, 2017 ngo-6: 53 PM
Iseluleko esiqinile uRajith noDavid. Ngizochibiyela lo mbhalo bese ngifaka amanothi.
Aug 1, 2017 ngo-12: 30 PM
Sawubona nginombuzo, ngenza ukuthunyelwa kwamaqembu ethu futhi ebudlelwaneni bakhe izinkulumo zawo mayelana ne-syntax, i-DNS, i-Quota, nokungavumelekile. Invaild i quess ilula ukuthi ama-mailadres abhalwe ngokungafanele futhi i-quota probaly isho ukuthi ibhokisi leposi ligcwele. Ngabe lokhu kulungile? Uma kungenjalo kusho ukuthini? njengoba wel njengoba ezinye ezimbili zisho: i-syntax ne-DNS? imikhonzo Gouwe